फेवा तालमा सोनिका संग रमाउदै पारस शाह भन्छन - ‘मेरा बुवाआमा मेरा लागि भगवान हुन’ - Sabal Post
फेवा तालमा सोनिका संग रमाउदै पारस शाह भन्छन – ‘मेरा बुवाआमा मेरा लागि भगवान हुन’
बुटवल – पुर्व युवराज पारस शाह फेरी मस्ती मुडमा फेला परेका छन् । उनी फेरी पोखरामा युट्युवर सोनिका रोकायसंग मस्ती मुडमा देखिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सोनिकाले आफ्नो युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । सोनिकाको द सोनिका सो मा पूर्वयुवराज पारससंगको भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् । जसमा सोनिका र पारस पोखराको फेवा तालमा एउटा डुंगामा देखिन्छन् । पारस डुंगाको पछिल्लो भागमा बसेका देखिन्छन् भने सोनिका अघिल्लो भागमा बसेर भिडियो लिइरहेकी छन् । भिडियोकै क्रममा पारसले चुरोट निकालेर सल्काउँछन् । सोनिकाले सार्वजनिक हुने भिडियोमा त्यसो नगर्न आग्ह गर्छिन ।
पछि पारसले आफु जस्तो छु त्यस्तै देखिन चाहेको बताएपछि सोनिकाले पनि सहमति जनाउँछिन् । उनले भन्छिन् तपाई जस्तो हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै स्वीकार गर्छौं । तर पारसले त्यसमा असहमति जनाएपछि सोनिकाले फेरी भन्छिन् तपाईले मलाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।सोनिकाले पारसका बारेमा आउने गरेका समाचारका बारेमा प्रश्न गर्छिन । तपाई यस्तो राम्रो हुुनुहुन्छ तर न्युजमा पनि किन के के आउँछ ? त्यसो भन्दा पारसले पुरा जवाफ दिन्नन उनले भन्छन् न्युजमा त के के…. सोनिकाले पारससंग अन्तरवार्ता लिन चाहेको भन्छिन् तर पारसले अन्तरवार्ता दिन नचाहेको बताउँछन् ।
तर पनि सोनिकाले तपाईको जिवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले आफ्नो लागि देश, परिवार र संस्कार नै आफ्नो जिवनमा महत्व राख्ने बताउँछन् । हाम्रो संस्कारमा परिवार नै भगवान हो उनले भन्छन् । सोनिकाले आफु पारससंग डुंगामा निकै मस्ती गरेको बताउँछिन् । सोनिकासंग पारसले डुंगा चलाईरहेका देखिन्छन् । डुंगा चलाईरहँदा सोनिकाले तालको बिचमा देखिएको मन्दिर हो ? भनेर प्रश्न गर्छिन उनले तालबाराही मन्दिर हो भनेर जवाफ दिन्छन् ।त्यसपछिको भिडियोमा सोनिकाले पारसले आफ्नो फेसवुकमा राखेको स्टाटसका बारेमा बताउँछिन् । पारसले केही दिन अघि आफ्नो फेसवुकमा राखेको स्टाटसका बारेमा ब्याख्या गर्छिन ।
नेविसंघ द्धारा गिरीजा बाबुको स्मृतीमा दिप प्रज्वलन
नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले १६ गते भैरहवामा चियापान…
शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौता गर्न नेपाली…